‘लकडाउन’ कहिलेसम्म यो हेर्नुस् – SaipalNews.com
काठमाडौं २२ चैत । मुलुकलाई कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउन सरकारले दोस्रोचोटि घोषणा गरेको लकडाउनको अवधि मंगलबार चैत २५ गते सकिँदैछ । तर, सरकारले अहिलेसम्म मंगलबारपछि लकडाउनको अवधि बढाउनेरनबढाउने बारे अहिलेसम्म सूचना दिएको छैन ।
चैत २५ पछि लकडाउन जारी रहन्छ कि खुल्छ भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा एक मन्त्रीले भने, ‘हामीले मात्र भनेर हुँदैन, भारतमा के हुन्छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ, किनभने कोरोना अब नेपालको मात्र समस्याको विषय रहेन ।तर, सरकारले अहिलेसम्म २५ गतेपछि के गर्ने भन्नेबारे सोच्न र निर्णय लिन बाँकी रहेको उनले बताए । मंगलबारअघि नै उसबारे सरकारले ठोस निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।
भारत सरकारले अप्रिल १४ अर्थात आगामी बैशाख २ गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ । बैशाख २ पछि के गर्ने भन्नेबारे मोदी प्रशासन अहिलेसम्म गृहकार्यमै छ ।यसैवीच, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विहीबार सबै राज्यका मुख्यमन्त्रीहरुसँग बैठक गरेका थिए, जसमा अप्रिल १४ पछि के गर्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको थियो ।
मोदीसँगको छलफलपछि अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रेमा खाँडूले यस्तो ट्विट गरेका थिए, ‘१५ अप्रिलमा लकडाउन समाप्त हुनेछ । तर, यसको मतलब यो होइन कि तपाई गल्लीमा खुल्लामखुल्ला घुम्न पाउनुहुनेछ । हामीले कोरोनाको संक्रमण कम गर्नका लागि निरन्तर प्रयास गर्न जरुरी छ । लकडाउन र सोसल डिस्ट्यान्सिङ नै यसलाई समाधान गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो ।’
मुख्यमन्त्री खाँडूले केहीबेरमै ट्विट डिलिट गरे । तर, उनको यही भनाइलाई आधार बनाउँदै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले भनेका छन् कि अप्रिल १५पछि भारतमा लकडाउन हट्न पनि सक्छ, तर केही निश्चत सर्तहरुका साथ । परिस्थितिमा सुधार नआएको अवस्थामा भारतको लकडाउन अरु लम्बिन पनि सक्छ ।यसैवीच भारत सरकारले १४ अप्रिलसम्म लकडाउन घोषणा गरे पनि एयर इण्डियाले अप्रिल ३० तारेखसम्मको टिकट बुकिङ बन्द गरेको छ ।
भारतसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएको नेपालमा चैत २५ पछि के गर्ने भन्ने प्रश्न निररुत्तरित छ । यसका लागि सरकारसँग करिब तीनवटा विकल्प देखिन्छन् स्
दुई-भारतले जहिलेसम्म लकडाउन गर्छ, त्यसैलाई पछ्याइरहने ।
तीन-भारतले जे गरे पनि चैत २५ देखि सर्तसहित खुल्ला गर्ने ।
नेपाल सरकारले चाहिँ अब २५ गतेपछि के गर्ला त ? चैत महिनाभरि लकडाउनको निरन्तरता ? वा सर्तसहितको खुकुलो ? अहिलेसम्म सरकार अन्योलमा छ । साभार अनलाइनखबरबाट ।
वायु सेवा सुधारको लागि समिति गठन गर्न सुझाव
प्रदेशसभा सांसदलाई नासु तहका स्वकीय सचिव